PressReader - Isolezwe: 2019-01-11 - Abe-ANC bazodida nonwabu ngengqephu
Abe-ANC bazodida nonwabu ngengqephu
Isolezwe - 2019-01-11 - IZINDABA - ZANELE MTHETHWA
BANETHEMBA lokuthi bazodla kahle abasiki bengqephu baseThekwini njengoba kunomgubho we-ANC eMoses Mabhida kusasa. Lo mgubho, waminyaka yonke obizwa ngeJanuwary 8, kuzokhuluma kuwo uMengameli uCyril Ramaphosa. Abanye abasiki bengqephu bamatasa, bathungela amakhasimende afuna ukukhipha unyawo ngemibala ye-ANC kulo mcimbi.
UNksz Mamsie Mkhwanazi, we-Afrolicious Designs, ongomunye wabasiki bengqephu, uthe ugxile ekuthungeni izimpahla ezinemibala yeqembu njengoba sekukhona abafake ama-oda.
“Bafuna kakhulu izimpahla ezipholile ngoba isikhathi esiningi bagqoka amateku kule ngqungquthela. Nokho abasathandi imfashini ejwayelekile njengezikibha eziphuzi, yingakho nami ngithunga okwehlukile,” echaza.
UNksz Mkhwanazi uthe ama-oda amaningi ngawabesifazane abafuna izingubo, izikhindi namaduku.
“Abantu abasathandi kakhulu ukuxuba imibala ejwayelekile ye-ANC kodwa bayagqoka nezimpahla ezimnyama bese kufakwa uphawu lweqembu. Kudlisa nendwangu yamasosha kwabathanda izikhindi kanti abanye bathanda ama-jumpsuit,” kusho yena.
Kunengubo ayifake ekhasini lakhe kuFacebook eyi-ball gown athe yona wayenzela ukuheha ngayo amakhasimende kodwa akekho ongagqoka efana nayo kulo mgubho. Uthe lolu hlobo lwengubo lungagqokwa emicimbini yekhethelo yeqembu.
UNksz Slungile Mokoena, weSluvin Designs, uthe ubhekile ukuthi kukhona azokuthola ngale ngqungquthela ngoba uyazithunga nezimpahla ze-ANC. UNksz Mokoena owaziwa ngokuthunga izimpahla ezinesitayela saseAfrika, uthe kukhona amakhasimende aseLimpopo naseGoli asefake ama-oda. “Abesilisa ba-ode ama-Afro shirt kodwa bagcizelela ukuthi abawafuni ajwayelekile. Bafuna ukuswenka ngempela uma kunemicimbi yabo futhi uma ubathungela bafuna izimpahla abangaswenka ngazo ngisho komunye umcimbi okungewona oweqembu,” echaza.
Uthe uthunga nezingubo nezikhindi ezinemibala ye-ANC kodwa kuya ngokuthi ikhasimende lifunani.
Kulindeleke ukuthi ingqephu idle lubi kulo mcimbi njengoba abaholi ngisho abalandeli beqembu bekhipha unyawo.
Ezinye izimpahla okulindeleke zithathe amehlo kuba yizigqoko, amakepisi, amajakhethi esikhumba namabhande.
Abanye bahloba ngisho ngamacici namawashi anhlobonhlobo anemibala yeqembu .
KULINDEKE idide unwabu ingqephu engqungqutheleni ye-ANC eMoses Mabhisa ngoMgqibelo, abasiki bengqephu baseThekwini okubalwa uNksz Mamsie Mkhwanazi sebeqalile ukuthungela amakhasimende